Tababaraha Ajax De Boer Oo U Dhaw In Uu Noqdo Badelka Mancini Ee Kooxda Man City.
Wargeyska Daily Mirror ayaa qoraya in tababaraha Ajax Amsterdam Frank de Boer uu yahay tababaraha u dhaw in uu badalo xagaaga dambe macalinka Man City ee Roberto Mancini .
Warar ayaa tilmaamaya in Mancini uu ka tagayo City dhamaadka xilli ciyaareedkaan ka dib markii kooxdiisa ay si fudud uga hareen Champion-ka isla markaana ku guul dareystay in kooxdiisa xilli ciyaareedkaan hogaanka xajistaan .
Tababaraha Ajax ayaa haatan niyad jabsan isaga oo u arka kooxdiisa Ajex koox u nugul in ay iska iibayaan ciyaartooyda taasina ay keeneyso in kooxda uu ka huleelo , iyadoo uu kooxdaas uu qabtay sanadkii 2010-ka .
Xidigaha sanadihii ugu dambeeyay ka soo tagay Ajex ayaa haatan bartilmaameed u noqday kooxaha ugu weyn qaarada yurub waxaan ka mid ah Luis Suarez .
Wargeyskaan ayaa ku adkeysnaya in Man City ka go`an tahay in kooxda keeneen Frank de Boer inkstoo tababarahaan Man City ku cel celiyay in uusan ka socon kooxda uuna kula joogo hishiis weli uu waqti ka harsan yahay .
Liverpool Oo Xaqiijisay In Heshiis Cusub Loo Soo Bandhigi Doono Kabtan Steven Gerrard.
Tababaraha kooxda Liverpool Brendan Rodgers ayaa xaqiijiyay in kabtan Steven Gerrard in heshiis cusub oo kooxda loo soo bandhigi doono.
32 jirkaan ayaa mustaqbalkiisa ciyaareed oo dhan ku qaatay Anfield, laakiin qandaraaskiisa haatan waxa uu dhacayaa dhamaadka xilli ciyaareedka soo socda.
Laakiin Rodgers ayaa aaminsan in kabtankiisa uu weli wax badan u sii qaban karo kooxda, isagoo ku taageeray inuu sannado badan sii ciyaaro.
“Steven hal sanno ayaa uga hartay qandaraaskiisa haatan, waana wax aan isaga iyo aniga ka hadli doono” ayuu Rodgers u sheegay suxufiyiinta.
“Ka dib waxaan arintaas u geyn doonaa maamulka kooxda.
“Muran kama taagna in Steven uu yahay ciyaaryahan wax walba u qabtay kooxda, laakiin weli wax badan inuu u qabto ayaa u haray.
“Waxaa ku tusinaya sida Steven uusan u aheyn shaqsi naftii jaceyl ah inuusan ka hadlin heshiis cusub sababtoo ah waxa uu diirada saarayaa kaliya inuu horumariyo kooxda iyo ciyaartiisaba.
“Laakiin sida iska cad, waxaan doonayaa inuu ogaado inuu qeyb weyn ka yahay waxa aan halkaan ku sameyneyno, heshiis cusubna waa waxa aan fiirin doono haatan ilaa iyo xagaaga.”
Martin O’Neil Oo Shaqada Sunderland Laga Buriyay Ka Dib Guul Daradii Man United .
Kooxda Sunderland ayaa qoraal ka soo baxay ku sheegay in ay iska fasaxeen tababarihii kooxda Martin O’Neill , iyadoo tanina ay soo baxeyso ka dib guul daradii shalay ay kala kulmeen kooxda Man United .
Sunderland ayaa looga badiyay hal gool iyadoo haatan ay hal dhibic kaliya ka sareeyaan mantiqadda looga haro kooxaha heerka koowaad ee Ingiriiska halka United ay hogaanka weli ku hayaan 15 dhibic .
Boggooda Internet-ka ayay Sunderland ku sheegeen ” waxa ay Sunderland shaacinayaan in ay iska fasaxeen tababare Martin O’Neill , waxaana uga mahad celineynaa intii kooxda uu la soo joogay , waxaan u rajeyneynaa guul , maalmaha soo socda ayaan shaacineynaa cidda badaleysa”.
Martin O’Neill ayaa hogaanka tababarka kooxda Sunderland qabtay xagaagii 2011-ka , waxa uuna haatan dadaal ugu jiray in kooxdiisa ka bad baadiyo mantiqada halista ee looga haro kooxaha heerka koowaad ee ingiriiska.
Xiddiga garabka kubadda uga qaabeeya kooxda Bayern Munich Arjen Robben ayaa gaashaanka u daruuray wararka lala xariirinaya ee ah in xagaaga dambe uu ka huleelayo kooxda Bayrn Munich uuna ku jeedo kooxda Galatasaray , halka warar kalana la xariiriyeen kooxda Inter Milan .
” Mar waxa ay ka hadlayaan kooxda Galatasaray , maalinta xigtana Inter Milan , tani waa waali , niyadeyda kuma jirto arintaas” ayuu raaciyay Arjen Robben .
Waxa uu intaa raaciyay Arjen Robben ” kaliya waxaan ka fikirayaa kulamada aan la leenahay Hamburg iyo Juventus , kaliya waxaan ka fikarayaa kooxdeyda Bayren Munich wax kale ma jiraan”.
Laacibkaan 29-sano jirka ahaa intaa ku raaciyay ” tani waa i dhibeysaa marka aan maqlayo wararkaas ila xariirinaya in aan ka tagayo Bayern Munich , haddii ay jiraan kooxo i xiiseynaya waa arin weyn waana tix gilinayaa balse arinta haatan taagan waxa ay tahay ma doonayo in aan sameeyo wax is badel ah ” ayuu sii raaciyay Robben .
Arjen Robben ayaa ku biiray Bayern Munich xagaagii 2009-kii waxa uuna hishiiskiisa Bayer ku siman yahay illaa iyo xagaaga 2015-ka.
Brendan Rodgers : Luis Suarez Kooxda Waa Uu La Joogayaa Kamana Tagayo Xilli Ciyaareedkaan.
Tababaraha Liverpool Brendan Rodgers ayaa mar kale ku celiyay in weeraryahankiisa luis Suarez uu baaqi ku sii ahaanayo kooxda isaga oo isla waqtigaas uga digay ciyaartooyda kooxda in aysan ka fogaanin ka hadalka arimaha kooxda marka ay qaramadooda la joogaan .
Waxaa soo noq noqday wararka laacibkaas la xariirinaya in uu doonayo in uu ka huleelo Liverpool uuna ku biiro kooxaha ka qeyb galaya Champions League inkastoo mar dambe uu Luis tilmaamay in warbixintiisa si qaldan loo leexiyay .
Brendan Rodgers ayaa tilmaamay in uu ku kalsoon yahay in laacibka uu kooxda sii joogayo illaa iyo xagaaga dambe iyadoo uu yri ” lama hadlin balse Suarez aad ayuu uga fogaadaa ka hadalka arimahaas , balse waxaan ogahay in Luis baaqi ku yahay kooxda , aad ayuu ugu faraxsan yahay halkaan.
” Waxaan laacibiinta ku iraahdaa mar waliba marka aad la joogtaan Liverpool haka fikirina wax aan aheyn Liverpool , marka aad la joogtaan qaranka dalkiina kaliya diiradda ha saarina qarankiina” ayuu raaciyay tababaraha Liverpool Rodgers
Ilo wareedyo ay qorayaan saxaafadda Faransiiska ayaa sheegaya in kooxda PSG ay diyaar u yihiin in ay ka ka kaaftoomaan weeraryahankooda reer Faransa Kevin Gameiro marka la gaaro xagaaga dambe .
Warku waxa uu intaa ku darayaa in arintaas ay dhaceyso hadii dalabyada lagu doonayo laacibkaas Kevin Gameiro ay qiimo ahaan gaaraan 10-milyan oo euro .
Xog ku dhaw PSG ayaa sheegaya in naadiga Valencia ee dalka Spain ay dadaal ugu jiraan in laacibkaas helaan xagaaga dambe , waxaana kooxdaan ay loolan ay kala kulmayaan kooxaha Liverpool iyo Bayern Munich oo iyana doonaya.
Waxaa la xusayaa in doonista Valencia ee laacibkaan uusan aheyn mid cusub balse Kevin Gameiro uu ku dhawaa in Valencia ku biiro muddo laba xilli ciyaareed ka hor xilligaas oo uu joogay kooxda Lorient balse saacidihii ugu dambeeyay ee uu xermaayy suuqa kala wareegga ayuu u saxiixay kooxda PSG .
Stevan Jovetic Oo Laga Cabsi Qabo In Dhaawac Dartiis Uu Ku Seego Kulanka AC Milan .
Kooxda Fiorentina ayaan xalay kaliya qasaarin sedex dhibic kulankii ay isaga hor yimaadeen kooxda Cagliari ee qeybta ka ahaa wareegga 30-aad ee horyaalka Talyaania balse waxa ay sidoo kale waayeen farsamada xiddigoodii koowaad ee Stevan Jovetic kaasi oo ka dhaawacmay bowdada.
Fiorentina ayaa kulankaas looga badiyay 2/1 iyadoo arinta ugu daran ay tahay iyaga oo waayay farsamada Jovetic iyadoo uu dhaawaca ka gaaray ee muruqa bowdada taasi oo keentay in garoonka laga saaro bilaawgii qeybtii hore ee ciyaarta .
Naadigaan ayaa qoraal rasmi ah oo ka soo baxay ku cadeeyay in Jovetic ka dhaawacmay muruqa bowdada macluumaad dheerina la sugayo ka dib marka baaritaanada lagu sameeyo saacadaha soo socda oo lagu sheegayo mudada uu maqnaanayo iyo heerka uu gaarsiisan yahay dhaawaciisa .
Balse warar hor dhac ah ayaa sheeaya in Stevan Jovetic uu ka maqnaanayo kulanka soo socda ee ay la leeyihiin kooxda Milan , waxaana laacibkaan isha ku haysa kooxda oo dooneysa kooxda Arsenal.
Jose Mourinho : Waa Adag Tahay In Gool Haye Diego Lopez Uu Galo Kursiga Keydka.
Waxaa muuqaneysa in ilaalada goosha Real Madrid ay noqon doonto arinta ugu hadal haynta badan saacadaha soo socda ka dib markii gool hayihii koowaad ee kooxda Iker Casillas uu ka soo kacay dhaawacii garoomada ka fogeeyay iyadoo Jose Mourinho uu xaqiijiyay in ay adag tahay Diego Lopez kursia keydka la giliyo ka dib heer ciyaareedkii wanagaasanaa ee uu soo bandhigay intii uu maqnaa Ikar.
Kulan wareed uu qabtay ka dib kulankii xalay ee bar bar dhaca ay kula galeen Real Zaragoza ayuu Jose yiri ” iima suura galeyso in aan ciyaar yahan u go`aamiyo in si joogto ah uu u safto illaa iyo dhamaadka horyaalka , tani waa arin mustaxiil , waxa aan dhihi karo waxa ay tahay Lopez waxa uu soo qabtay shaqo mihiim ah , waxa uuna kooxda ka saaciday in ay bar bar dhac galaan kulankii xalay”.
“Waxa uu ka hor tagay kubaddo in ay dhashaan u dhawaa , waxa uuna soo maray Lopez waqti adag sida kulamdii Barcelona iyo Man United” sidaas waxaa yiri Jose Mourinho.
Jose Mourinho waxa uu intaa ku daray ” waxaa muhiim ah in aan si saraaxad ah u hadalno , Lopez haddii uu ku sii socdo heer ciyaareedkaan waxaa adag in kursiga keydka uu galo”.
Mar la weydiiyay in uu u yeerayo Ikar Kulanka Champions League ee Galatasaray ” maya kulankaas uma yeerayo , xittaa keydka kuma jiro balse kulanka levante ayaan u yeereynaa”ayuu yiri Jose Mourinho.
Real Zaragoza ayaa bar bar dhac gool iyo gool gurigeeda kula gashay Kooxda Real Madrid oo ay hada calaamad su’aal ka saaran tahay booska labaad ee La Liga.
Zaragoza ayaa hogaanka qabatay daqiiqadii 6aad ee qeybtii hore, waxaana goolka u dhaliyay ciyaaryahan Rodi.
Laakiin waxaa goolkaas u bar bareeyay Real xidigooda Cristiano Ronaldo oo kubad uu ka helay Higuain si qajajac daafaca lugaha kala baxsaday, dabadeedna uu daba mariyay goolhaye Roberto.
Qeybtii hore ciyaarta ayaa lagu kala nastay bar bar dhac gool iyo gool, waxaana natiijadaas mar walba u muuqatay mid aanay u cuntameyn Real, maadaama ay ogaayeen in kooxda ay xafiiltamaan ee Barcelona taako loo dhigay.
Si kastaba qeybta labaad ciyaarta ayaa natiijadeeda waxba iska bedelin, inkastoo ciyaarta ay aheyd mid iska deganeyd, hadana ciyaaryahan Helder Postiga ayaa labo kubadood oo madax aheyd si fantastik uga bad baadiyay goolhaye Diego Lopez.
Postiga ayaa ka faa’ideysanayay karoosyada u imaanayay, waxaana daqiiqadii 88aad ee ciyaarta dhamaadkeeda uu ku sigtay inuu gool ka dhaliyo, hase ahaatee waxaa faro cidiyadood ku bad baadiyay Goolhaye Lopez.
Sidoo kale Ronaldo oo ay isku dal ka soo jeedaan ayaa isna dhamaadkii ciyaarta kubad halis aheyd la galay diilinta ganaaxa, inkastoo uu goolhaye Roberto bad baadiyay.
Bar bar dhaca Real Madrid ay gashay waxay faa’ido u tahay kooxda Attletico Madrid oo labo dhibcood laga sareeyo, iyadoo kaalinta 3aad ku jirta, isla markaana leh 60-dhibcood.
Kooxda Barcelona ayaa leh 75-dhibcood, inkastoo bar bar dhac labo gool iyo labo gool ay ku qabatay Celta Vigo.
Man United Oo Xiiseyneysa Saxiixa Thiago Alcantara Xilli Xiddiga Uu Doonayo Inuu Barcelona Ka Tago.
Manchester United ayaa dib u soo cusbooneysiin doonta xiisaheeda ciyaaryahanka khadka dhexe ee Barcelona Thiago Alcantara ka dib markii aabihiis uu si maldahan u sheegay in ciyaaryahanka uu diyaar u yahay inuu ka tago kooxda.
United ayaa seddexdii sanno ee ugu danbeysay daneyneysay xiddigaan reer Spain, waxaana dalab 15 milyan ginni ah laga soo diiday 18 bilood ka hor.
21 jirkaan ayaa doonayay inuu ka mid noqdo ciyaartoyda joogtada ah ee Barcelona, laakiin waxa ay haatan u muuqataa inuu aqbalayo in la joogo xilligii uu dhaqaaqi lahaa sida ay qoreyso Daily Mail.
“Wiilkeyga waqti intaan ka badan ayuu u ciyaari lahaa koox kale oo adduunka ah.” ayuu yiri aabihiisa Mazinho.
“Wax badan ayuu ka baranayaa ciyaartoyda waa weyn ee uu la ciyaarayo laakiin Thiago waa nin hami weyn leh, waxaana uu u baahan yahay inuu ciyaaro.
“Cidna ma oga waxa dhici doona mustaqbalka. Kubada cagta wax badan ayaa isbedbedela, wax walbana waa ay dhici karaan. Hadii Thiago doonayo inuu ka qeybgalo koobka dduunka ee 2014 waxa uu u baahan yahay inuu kulamo badan ciyaaro.
“Thaigo waxa uu leeyahay awood uu guulo kula gaaro Barca. Laakiin waqti intaan ka badan ayuu u ciyaari lahaa koox kale. Waxa uu ku biiri karaa koox kasta oo adduunka ah.
“Ma aqaano hadii Barca ay soo iibsaneyso ciyaaryahano badan xagaaga. Waxa ay durbaba heystaan ciyaartoy khadka dhexe ka ciyaari karta, sidoo kale Thiago walaalkiis Rafinha ayaa isna qeyb ka noqon doono kooxda koowaad xilli ciyaareedka soo socda.”
Alcantara ayaa u dhaqaaqay Spain markii uu shan jir ahaa, waxaana uu Barcelona u saxiixay sagaal sanno ka dib.
Isagoo kulankiisa ugu horeeyay ee kooxda waa weyn u saftay 2009kii kulan ay la ciyaarayeen Mallorca, hadana waxa uu goolkiisii ugu horeysay u dhaliyay sannadkii ku xigay.
Waxa uu saxiixay heshiis cusub oo labo sanno ah dhawaan, iyadoo qandaraaskiisa kooxda lagu burburin kar 30 milyan euro oo u dhiganta 25 milyan ginni.